Kwaphela iminyaka eminingi balimi izifunda Central baseYurophu Russia ngomona zibabaza ezihlabayo engadini hydrangea pyshnotsvetuschie kuphela ezindaweni eningizimu kodwa izingadi European. Akunjalo kudala, ngenxa yemizamo nokukhuthazela abalimi ezivela emazweni ahlukahlukene ngesiRashiya uvele izingadi Hydrangea macrophylla, izinhlobo ebusika-eziqinile ezingamelana nezinselele izimo zethu esikhundleni nzima zezulu ukujabulisa zezimbali obuningi.
BaseYurophu osikweleta ubungane hydrangea abahambi isiFulentshi, ngubani ngasekupheleni kwekhulu XVII, Esenze ngomkhumbi emhlabeni wonke, baletha lesi sihlahla esiqhingini Mauritius. Le nguqulo yokuqala ukuthi babizwe imbali enhle yokudumisa udadewabo womunye amalungu bomkhankaso, Prince noKarla Genriha ka Nassau-Siegen - Princess Hortense. Kunenye nguqulo: lesi sitshalo ogama lakhe behlonipha yakhe ayithandayo Hortense semvelo kanye nososayensi kusukela France Philibert Commerson. Kukhona futhi ngempela inguqulo temibhalo yephrozi netindzaba umsuka igama: kusukela lesiLatin elithi hortensis, okusho "ensimini" njengoba esiyize atholakala izingadi ombusi esiqhingini Mauritius.
Zezitshalo okuthiwa simila gidrangiya macrophylla (Hydrangea macrophylla), kodwa igama ubudala nayo elondolozwe ku elinye igama - engadini hydrangea (Hydrangea hortensis). Gidrageniya - igama lesiGreki futhi liqukethe izingxenye ezimbili: hydor - amanzi angeion - isitsha. Ngakho-ke kwenzeka ukuthi igama lisho "isitsha amanzi." Abanye abacwaningi basikisela ukuthi lesi sitshalo ithole igama ngenxa imbewu yayo pods afana izimbiza amancane. Kwabanye, ugcizelela isidingo hydrangeas okusezingeni eliphezulu emanzini.
Emvelweni, hydrangea macrophylla - kuyinto esiyize ukuthi singafinyelela ubude obungamamitha 4 amamitha. Ezimweni yethu enyakatho simila kuyaqabukela amamitha angaphezu kwamabili. Lokhu uhlobo hydrangea ubizwa nangokuthi umbala, njengoba izinhlobo zamasiko kungase kudingeke amacembe umbala omhlophe, pink blue eqoqwe inflorescences eyindilinga nokunye akuvamile ngaphezulu ukuma yegilo flat ngenhloso ububanzi 20 cm noma ngaphezulu. Esanda kutholakala uvele Avantgarde grade inflorescences elingase afinyelele cm 30 ububanzi. Izimbali kwalesi silwane gidrangii kungaba elula, lulwimi double futhi terry. La mahlamvu zalesi sitshalo izimbali ngokuvamile ube ukuma elula oyindilinga, kodwa kukhona izinhlobonhlobo eziye insephe amacembe, lukathayela bese serrated. izinhlobonhlobo Abaningana impela ezingavamile nge ezimbili-tone umbala, ezifana Harlequin, Ngiyakuthanda ukuqabula noma Ripple. Ngaphezu kwalokho, Hydrangea macrophylla (nezihlahla Ornamental futhi izimbali) has:
eshiya elikhanyayo umbala elula amaqanda emise green;
inflorescences ukuma eyindilinga noma flat, kwakheka imikhawulo amahlumela.
Izimbali ihlala kusuka July kuya ku-August. inflorescence ngamunye izimbali kungase kube khona amafomu amabili:
fruiting nabancane maphakathi;
zangaphandle - amahle zokuhlobisa, kodwa oyinyumba.
Kanjani ukuze uthumele abandayo?
Kuyaphawuleka ukuthi kwelinye izwe isikhathi eside kuphela conservatories kanye ukulima zasendlini wahlangana Hydrangea macrophylla. izinhlobonhlobo Winter-eziqinile zalesi sitshalo, osimo uyajabula balimi ekupheleni 80s kwekhulu elidlule, azigcini nje ngokubukeka kodwa futhi kuthatha lokushisa zazo ezimbi. Ngakho, izinhlobonhlobo North zizalela American buthule ukubekezelela okushisa afinyelela ku -15 0 C, abalimi European - ukuba -20 0 C. Kungakhathaliseki ukuthi luhlobo luni isimangalo developers noma nabathengisi, ngokuya ingxenye YaseYurophu nezihlahla yethu ezweni lolu hlobo yokukhosela kangcono ebusika, kunokuba ukhathazeke kwaze kwaba sentwasahlobo, bayoba ukusinda noma cha.
Njengoba kuboniswe, zonke izinhlobo ebusika-eziqinile of Hydrangea macrophylla ungakwazi Yiqiniso kunemibandela luhlukaniswe amaqembu ezilandelayo:
1. Izimbali zokhuni ubudala: Mariesii Grandiflora (White Wave), Mariesii Perfecta (BlueWawe), Alpengluehn, Bouquet Rose, Red Baron (SCHOENE Bautznerin), Lilacina, Etoile Violette nabanye.
2. Vechnotsvetuschie noma remontant. Ngokungafani iqembu lokuqala, akha inflorescence kokubili ubudala futhi amahlumela amasha. Lezi zihlanganisa eziqinile hydrangea izinhlobo ezinkulu-remontant like Grant`s Ukukhetha, isibonelo, kanye Twist-n-Memeza, Pink Wonder, Hamburg, Passion.
Uma ukuthenga leli qembu izinhlobo kwilebula, uqiniseka ukuthola okucashunwe Nokuphikelela, Everyblooming noma Phinda ukuqhakaza (RE).
Izinhlobonhlobo futhi uchungechunge
Ekupheleni kuka-80-yalolucwaningo kwekhulu XX e Melika babe izinhlobonhlobo ebusika-eziqinile lokuqala hydrangea macrophylla, bakwazi ukhule futhi yokuqhuma ezifundeni nge jelly nobusika zeluliwe, iziphethu cool. Enye "izibulo" hydrangeas remontant baba inhlobo Endless Summer - Endless Summer. Ngandlela-thile kamuva, emakethe wethulwa eziqinile aminingi ukudlula Endless Summer, grade Early Sensation.
Uchungechunge Endless Summer
Endless Summer - kuba Hydrangea macrophylla. izinhlobonhlobo Winter-eziqinile kwezindlu kusekelwe kuyo Kwatholakala ezihlukahlukene umbala wenza sortogruppu Endless Summer:
Zonke izinhlobo besiyoba sikhulu futhi kube enhle, round efihlekile, ngaphandle Twist-no-Memeza, okuyinto flat.
Phakade & Ever
Ngokuhamba kwesikhathi, kwadalwa esekelwe ezihlukahlukene Sensation Early uchungechunge okudayiswayo ngempumelelo Phakade & Ever, okuhlanganisa izinhlobo:
Kumalebula ngaphambi igama ezihlukahlukene liyadingeka ukhombise chungechunge, ezifana Phakade & Ever Red Sensation.
Uchungechunge You & Me
Labo abakhetha Terry Hydrangea macrophylla, izinhlobo frost ukumelana ingatholakala Japanese You & Me Series:
Uthando - pink eseyintsha 2015.
Hydrangea macrophylla: Sibutsetelo izinhlobo ezintsha
Minyaka yonke siyanda isibalo izinhlobo ebusika-eziqinile remontant macrophylla hydrangeas. Thina ngikuxoxele izibuyekezo.
Endless Summer Bloom Star sidalwe ngesisekelo intandokazi ezifana ne izinhlobonhlobo eziningi Endless Summer. Izimbali hydrangea le inflorescences esikhulu eyindilinga okwesibhakabhaka noma pink . Ububanzi zazo ongafinyelela 18 cm oyinyumba izimbali coloration incike asidi kwenhlabathi: alikhali ngaphezulu umbala pink kuyoba, ngesikhathi esidi - violet-blue. Hhayi inflorescences zokuhlobisa kuphela, kodwa futhi Kuphendula burgundy.
Hovaria Hanabi Rose Flowers ezinkulu, flat usayizi inflorescence 18-25 cm. Izimbali double, pink ukukhanya, kodwa uma acidify umhlabathi, bese uguqula umbala oluhlaza okwesibhakabhaka.
You & Me Love - omusha kulo nyaka, ne ezibomvana nezimbali double, amacembe kwangaphakathi zipendwe ngombala oluthi alube phuzi. Umbala ingase yehluke kuye ngesistimu asidi kwenhlabathi.
Endless Summer besimayili nokukhophozela uMlobokazi - ezihlukahlukene ezithakazelisayo kakhulu, lapho amacembe ukushintsha umbala. I efihlekile Uvule lokhu hydrangea e izimbali ezimhlophe lulwimi double ukuthi kancane kancane ngesineke ukukhanya pink "othi awube".
Avantgarde - ibanga has akusito letinsha, kodvwa namanje akuvamile ihlangabezane emasimini ethu. Usayizi omkhulu futhi obukhulu inflorescences eyindilinga nge ububanzi cm 30 - iyona eyenza lokhu kusuka kwamanye Hydrangea macrophylla. izinhlobonhlobo Winter-eziqinile "ofeleba" kangaka, ngisho okufakiwe emihlanu imibala - oluhlaza, omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka, noboya obudaywe baba nsomi kanye pink - ayikenziwa aqine.
Ukufukamela noma cha?
Abalimi Iningi funda ukuthi ezimweni zethu akudingi indawo Hydrangea ebusika macrophylla (izinhlobo abandayo nemithi), ingxoxo waphenduka sina ku-inthanethi futhi omagazini. Kodwa umkhuba, njengoba ngokuvamile kunjalo, konke endaweni yayo. Uma umtshali ufuna ukujabulela izimbali zawo ziwukudla kusukela ekuqaleni kwehlobo kuze frost, ichweba ngokuqinisekile zinkulu. Uma kwenzeka ukuthi ngeke sijabulise hhayi kakhulu eside futhi zezimbali obuningi kusukela maphakathi no-ihlobo ekwindla, awukwazi ukumboza. Abaningi abaye wathenga izitshalo Hydrangea macrophylla ngididekile: "Indlela kulotshiwe ukuthi Ubusika bengenamizi, futhi ochwepheshe bathi Kunalokho?" Iqiniso ukuthi akukhona bavikelwe enqabayo amazinga okubanda ebusika izinso izolahleka ngonyaka odlule, kodwa amahlumela ngaphambi kokuba azakhele nemiqumbe futhi eqhakazile, kusafanele zikhule. Ngakho ngaphambi kokuba uthenge lesi sitshalo enhle ngempela, cabanga ukuthi uzokwazi ukudala izimo ezikahle kakhulu kuye.
Indlela ukulungiselela ebusika?
ERussia emaphakathi ukulungiselela ubusika Hydrangea macrophylla kufanele zithunyelwe kudala njengoba Septhemba. Okuhle ehlathini isimo ubusika lehliselwa nomswakama. Ukuze uvimbele umswakama ngifike simila, babeka phezu ke Uhlaka kanye phezulu ikhava ifilimu. Duzane hydrangeas umbe anemifantu esikhethekile amanzi amanzi, futhi ngenxa yalokho, ayeke ukuthambisa. Ekuqaleni kuka-Okthoba, asuse izimbali egqwalile, onke amaqabunga ne petioles. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ehlathini, ochwepheshe ukweluleka, kungcono ufafaza ingadi umhlabathi noma Peat, kungaba ingxube. Okushukunyiswa tie futhi libekwe ongaphakeme lokhuni amabhodi, ikesi noma imigoqo. Ngaphezu kwakho konke design ikhiyiwe izingqimba eziningana ufune ukuhlanganisa indaba kuphela, isb lutrasila. amathiphu ihlumela Ungase futhi afafaze torfozemlyanoy noma inhlanganisela sawdust whereupon lonke isitshalo ukufukamela obukhulu polyethylene ifilimu.
Ezinye iseluleko esisebenzayo
Okokuqala, waphinda iphawule yakho yokuthi ngokukhetha eyodwa noma elinye ezihlukahlukene, ngokuyinhloko ukubona kanjani ngendlela ezovumelana nezimo zethu zezulu amelana izifo. Mhlawumbe ulwazi oluzuzisayo ezinye izici ukutshalwa hydrangea macrophylla engadini:
kuyinto efiselekayo ukutshala isitshalo enhlabathini okuxekethile, okwenza kube ngokushesha baphaphame entwasahlobo;
isitshalo isitshalo ku-ingxenye ephakeme ngoba singcono Ubusika umswakama ongaphakeme;
phambi ukukhosela ehlathini ebusika qiniseka bazogcwalisa Igumbi zobumba hydrangea amanzi sondle umanyolo kanye phosphate umquba;
musa ukusheshe ayokhosela entwasahlobo, lesi sihlahla uyisa esindayo ukubuyela entwasahlobo yesithwathwa kunokukwenza kunesithwathwa ebusika;
ngemva entwasahlobo kuyoba abandayo, musa ngokushesha asuse ukufukamela hydrangea spunbond noma lutrasil ngoba ilanga elikhanyayo ungafaka ithenda amahlumela.
Yesivakashi kusuka ezindaweni ezishisayo - arrowroot. Ukunakekelwa ekhaya has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo
Rosa Gloria Dei: ethandwa kakhulu emlandweni imbali
Izinkinga emvelweni Kazakhstan
Indlela ukudala i-akhawunti in the "isisusa" noma ukuthola usuku sokudalwa